4K ProRes kurekodha inongowanikwa chete kubva ku13GB iPhone 256 | IPhone nhau
4K ProRes kurekodha inongowanikwa chete kubva ku13GB iPhone 256
Imwe yemabhuku makuru anouya kubva paruoko rweiyo nyowani iPhone 13 Pro renji ndiyo tsigiro yeProRes vhidhiyo yekumanikidza fomati, chiitiko icho Apple yakashandisa nguva yakawanda mukuratidzwa kwechizvarwa chitsva cheiyo iPhone 13 Pro asi icho chine muganho.
Sezvatinogona kuona pawebhusaiti yeApple, mukana wekurekodha muProRes fomati mune 4K mhando pane 30 mafuremu pasekondi inogumira kune mamodheru ane 256GB ekuchengetedza pamwe, uchisiya iyo 128 GB modhi, modhi inogona kungoshandisa iyi fomati mune 1080p resolution.
apuro haitsanangure chikonzero cheiyi ganhuriro, asi zvinofungidzirwa kuti kambani yakafunga kuti 128 GB yekuchengetera haina kukwana nzvimbo yekuchengetera mafaira anorema anogadzirwa.
Nekudaro, kana aigona kupa mukana uye kunyangwe mushandisi anosarudza kuishandisa kana kwete, nekuti kumapurojekiti madiki hazvizodiwe kuve nenzvimbo yakawanda yekuchengetera. Izvo zviri pachena ndezvekuti, uchitevera huzivi hwaApple, kana iwe uchida kushandisa 4K kurekodha pa30 fps, uchafanirwa kubhadhara.
La musiyano wemutengo pakati peiyo 128 GB yekuchengetera vhezheni uye iyo 256 GB vhezheni iri ma120 euros, mutengo uyo kana iwe uchida kubhadhara 1.159 euros yeiyo iPhone 13 Pro 128 GB kana 1.259 yeiyo iPhone Pro Max ine imwecheteyo yekuchengetedza chinzvimbo, hazvizobatanidze kwakakura kwehupfumi.
Iyo ProRes fomati inopa kukwirira kwemavara kwakakwirira kutora nzvimbo diki pane mudziyo, Zvichiita kuti ive yakanaka yekurekodha semi-nyanzvi mapurojekiti, kana kunyangwe nyanzvi. Izvi zvinoshandiswa zvakanyanya mumashure-kugadzirwa workflows uye zvinogona kutumirwa nyore nyore kune vapepeti vakaita seFinal Cut Pro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » 4K ProRes kurekodha inongowanikwa chete kubva ku13GB iPhone 256
Ndine mubvunzo, pa4K unogona chete kushandisa ProRes pa30fps asi inogona kushandiswa pa1080p pa60fps?
Mumufananidzo wandatora kubva kuApple webhusaiti uye akaisirwa muchinyorwa, zvinoratidza kuti inogona kurekodha muProRes fomati pa4K uye 30 fps, resolution iyo yakadzikiswa ikaita 1080 uye 30 fps mune 128 GB vhezheni.
Parizvino zvinoita sekunge fomati iyi inogumira kune makumi matatu fps, zvinosuwisa.
Tichafanirwa kumirira anotevera iPhone mamodheru kuti atore mukana weiyi fomati pane yakakwira furemu rate.
Iyo nyowani iPhone 13 inorema zvakanyanya uye iri mukobvu kupfuura iyo iPhone 12
Iyo nyowani Apple Watch Series 7 inokwidza yakafanana processor seiyo Series 6